‘छुटेका अनुहार’ हरूको ऐंठन
अक्टोबर ६ मा फाइन प्रिन्टका सञ्चालक अजित बरालले लेखे ‘यो दशैंमा एउटा किताब मात्र पढ्ने सोचिराख्नु भएको छ भने रमेश सायनको छुटेका अनुहार पढ्नुस् ।’
अलग प्रकाशक गृहको व्यक्तिले आफ्नो प्रकाशन गृहको पुस्तक नपढी अर्कै प्रकाशकबाट प्रकाशित सायनको पुस्तकको प्रशंसा गर्नु चानचुने कुरा थिएन । बराल एक पाठक मात्र थिएनन्, उनी एक जिम्मेवार प्रकाशन गृहका सञ्चालक पनि थिए । जब मेरो आँखा अजितको ट्वीटरमा पर्याे मैले निर्णय लिइहालेँ ।
असोज २० गते मण्डला थिएटरको छेउमा जीवनसङ्गिनीलाई राखेर कवि रमेश सायनले भनेका थिए, ‘म झुट बोल्दिनँ...।’ प्रसङ्ग थियो उनको नवीन कृति ‘छुटेका अनुहार’ को विमोचनको । पुुस्तक विमोचन गर्ने परम्परागत शैलीमा परिवर्तन आउँदैछ । रमेशको नयाँ कृतिको घुम्टो उनकै प्रिय अनुहारले उघारेको थियो । मलाई हुटहुटी थियो, आखिर बरालले सिफारिश गरेको पुस्तक कसो नपढुँला । के सायनले साँच्चै झुटो लेखेका छैनन् ?
यो किताबले जो कोहीलाई नोस्टाल्जिक बनाउँछ । बाल्यकालका यादगार पलले आफूलाई सोही उमेरमा पुर्याउन सायनले कलात्मक ढङ्गले कलम चलाएका छन् । एक सामान्य पाठकको हैसितमा अब्बल कृति रहेको छुटेका अनुहार रमेश सायनको असली अनुहार हो । अझै उनै सायनजसरी झुट नबोली भन्दा यो उनको आत्मकथा हो । उनले बडो चलाखीका साथ आफ्नो जीवनको कुरा भनेका छन् । पाठकले पुस्तक पढेपछि ठटयौली पारामा भन्लान ‘रमेशले आफ्नै कुरा भन्न किन यसरी दुख गर्यो ?’
कविताका माध्यमबाट पाठकमाझ चिनिएका सायनले फुटकर लेखहरूमार्फत् आफ्नो परिचय दिइसकेका थिए । सायद बरालले पनि रमेशको लेखकीय क्षमताको अन्दाज फुटकर लेखकै आधारमा गरेको हुनुपर्छ । सोही क्षमताको अधारमा बरालको ट्वीटमा जवाफ लेख्दै लेखक नयनराज पाण्डेले भनेका छन्, ‘रमेश सायनको लेखको पुरानै प्रशंसक हुँ ।’
अब यो किताबपछि सायनका थुप्रै पाण्डे जस्ता पाठक थपिएका छन् । त्यसैले त उनले पुस्तकको अन्तमा भनेका छन्, ‘तपाईं बोल्न नछाड्नुस् म सुध्रन चाहन्छु ।’ नबोलौं पुुस्तकको अन्त्यमा पाठकसँग गरेका आग्रह खेर जाला । ‘म बोल्छु । असल पाठक बन्न लेखक सुध्रनुपर्छ,’ मेरो मनले भन्यो ।
दशैंको फुर्सदिलो समयमा मैले एउटा मात्र पुस्तक च्यापेँ । यो समयमा आफन्तजनसँगको भेटघाटबाट बचेको समय पुुस्तकतिर अलमलियो । ‘सिमकार्ड’ बाट शुरु भएको कथाले ‘काम र काम’ मा विश्राम लिन्छ । दर्शन बढी भएको कृतिमा यो समाजको सचित्र बयान गर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
नेपाली समाजमा प्रविधिले मारेको फड्कोलाई यथार्थपरक ढङ्गले पस्किइएको छ । रमेशले कथा बटुुल्न कुुनै काल्पनिक पात्र खडा गरेका छैनन् । कसैको कथा सापटी लिएका छैनन् । आफ्नो अनुभवलाई रोचक पाराले पाठकमाझ पस्केका छन् । जीवनको सङ्घर्षको पाटो, आम युवाको मनोेभाव उनले आफ्नो पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सिमकार्डभित्रका कुरा भन्दै गर्दा आफू पनि रमेशसँगै दगुरिरहेको छु कि भन्ने भान हुन्छ । जीवनमा पहिलो पटक बोकेको नोकियाको ११ सय मोडल अहिले मेरो मस्तिष्कमा झलझली आइरहेको छ । विदेशबाट काकाले पठाइदिएको सो मोबाइल सिमकार्ड देख्न नपाई एक दिन मसँगै शौचालय गएर कहिल्यै फर्किन पाएन । गोजीमा रिङ ब्याकटोन बजाएर साथीहरूमाफ ‘हिरोइज्म’ देखाएको आजजस्तो लाग्छ । रमेशको मोबाइल कथाले पुनः सिमकार्ड युगमा प्रवेश गराउँछ । जुन बेला सिमकार्ड बेचेर धेरैले मोबाइल किनेका थिए ।
रानीको कथाले तराई–मधेसमा भइरहेको दाइजो प्रथाको बारेमा सचित्र वर्णन गर्छ । यहाँ कुनै फिल्मका पात्र झैँ लाग्छन् । तर आजसम्म पनि यो कुप्रथा हट्न सकेको छैन । दाइजो दिन नसक्दा कसैले आफ्ना चेली भगाइदिओस्सम्म भनेर याचना गर्ने अवस्थाको कथाले गला अवरुद्ध पार्छ ।
यससँगै हाम्रो नेपाली समाजको विविधिता र धार्मिक तथा सामाजिक सहिष्णुतालाई समेत प्रस्टसँग देखाइएको छ । यो सबै पढ्दा लाग्छ कतै यी कुरा कुनै चलचित्रका पात्रहरूको त होइन ? तर, बिल्कुल होइन । यी र यस्ता कुरा रमेश बाँचेको माटोको हो । यहाँको हावापानी र परिवेशको हो । हामी बाँचेको समयको हो ।
रामलाल र कृृष्णबहादुर यस पुस्तकमा आम नेपाली किसानका प्रतिनिधि पात्र हुन् । समाजको यथार्थ ओकलेका यी कथाले आजको नेपाली समाजको वर्णन गर्छन् । सत्ता परिवर्तनपछि मुलुकुको थिति फेरिन्छ भनेर विगुल फुक्नेहरूलाई यी कथा चुनौती बनेका छन् ।
समृद्धिको शिखरतर्फ चढ्ने पाइलाहरू कहाँ–कहाँ रोकिइरहेका छन् भन्ने बुझ्न यो पुस्तक काफी छ । कमजोर राज्य संरचनाको असर किसानको खेतमा परिरहेको छ । एउटा गरिब हलियाको जीवन नोकरी गरेरै बित्छ । जीवनको उर्जाशील समय अरुको काममा खर्च गरेर पनि उसले आफ्नो जीवनमा आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैन । कथाले पसिनाको मूल्य नभएको दलिल पेश गर्छ । जुन क्रम हाम्रो समाजमा आजसम्म पनि जारी छ ।
रामलालले आफ्नो जीवनमा आर्थिक उन्नति गर्न नसक्नुुका कारण के हुन् ? कृष्णबहादुर मल्टिनेशनल कम्पनीको चङ्गुलमा परेर कसरी ऋणमा डुब्छ ? यी र यस्ता बग्रेल्ती प्रश्नहरू पाठकको मनमा उब्जिन्छन् । सामाजिक समस्याका चिरफार गर्ने ल्याकत राख्नेहरूले कहिल्यै यी गरिब किसान र हलियाको जीवन परिवर्तन गर्नेतर्फ सोचेनन् । उनीहरू बच्चालाई ललिपप देखाएर झुल्याएझैं विभिन्न संस्था र व्यक्तिको जालमा परिरहे । हाम्रो प्रत्येक समाजमा रामलाल र कृष्णबहादुरहरूको अनुहार छ । उनीहरूको दुःख छ । पुस्तक पढिसकेपछि यी र यस्तै अनुुहारहरूले ऐंठन गरिरहन्छन् ।
लेखकले यौन र प्रेमका कुरालाई खुुलेर लेखेका छन् । जीवनका सङ्घर्षको पाटो, सन्तान हुर्काउँदाका कष्ट, विकट पहाडी भेगमा अभिभावकले गरेको दुुःख, आफ्ना बाल्यकालका यादगार बदमासी, विभिन्न उमेर समूहको मनोदशा पुस्तकमा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ ।
लेखक स्वयम् कोरियाको माटोमा पसिना बगाएर आएको कथाले त्यहाँको यथार्थ प्रस्ट्याउँछ । कामप्रतिको लगाव र त्यसको प्रतिफलको कथा मिठो शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
धेरै त्यस्ता पुुस्तक छन्, जो कहिल्यै नसकियोस् भनेर पढिन्छन् । मेरो हकमा पनि यो पुुस्तक यस्तै भयो, जसरी बाल्यकालमा चकलेट नसकियोस् भनेर बिस्तारै चुसिन्थ्यो । पुुस्तकका एकएक वाक्यांशले पाठकलाई तानिरहन्छ ।
एकाध कथामा केही मनोटोनस हुने संवाद बाहेक अधिकांश च्याप्टरको लेखनशैली कविताजस्तो छ । कवितामार्फत् लेखन कर्ममा हाम फालेका रमेशको थर पनि यो पाठकले यही पुुस्तक पढेपछि मात्र थाहा पायो, जो वर्षौंअघि साथी भएर पनि थाहा पाएको थिएन । त्यसैले मैले शुरुमै भनेको छु छुटेका अनुहार रमेश सायनको असली अनुहार हो । यो उनको आत्मकथा हो । पुस्तक पढिसकेपछि जो कोहीले भन्छ, ‘मोराले आफ्नै कुरा सुनाएछ ।’